Hanyu pinyin - Wikipedia
Ny pinyin (拼音 pīnyīn : tsipelim-peo) ary ho an'ny fiteny han manokana (漢語拼音 hànyǔ pīnyīn : tsipelim-peon'ny fitenin'ny han) dia fomba fandikana amin'ny abidy latina ny fiteny mandarina (na putonghua). Ny dikan-tsoratra pinyin dia ampiasiana any amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina ho an'ny fandikana amin'ny abidy latina na amin'ny fampianarana ny teny sinoa.
Ny pinyin dia vokatry ny volavola mikasikan'ny dikan-tsoratry ny fiteny sinoa namoaka ny pinyin noeken'ny governemanta sinoa. Novaina tamin'io romanizasiôna io ny fomba fanaovana rômanizasiôna nisy tao taloha toy ny Wade-Giles izy (1859 ; novaina tamin'ny 1912) na ny bopomofo. Misy fanaovana romanizasiôna manokana ho an'ireo fiteny sinoa hafa na fiteny tsy voasokajy ho ao amin'ny vondron'ny fiteny sinoa.
Noho ny fiteny mandarina mampiasa haabom-peo, soratana amin'ny alalan'ny diakritika manaraka izy :
Ny haabom-peo voalohany dia maneho feo avo ary soratana amin'ny tendro mahitsy ˉ ;
Ny haabom-peo faharoa dia maneho feo miakatra ary soratana amin'ny tendro miraika havanana ˊ ;
Ny haabom-peo fahatelo dia maneho feo mihidina dia somary miakatra ary soratan amin'ny hatseka ˇ ;
Ny haabom-peo fahaefatra dia maneo feo mihidina ary fohy ary soratana amin'ny tendro miraika havia `.
Rehefa tsy afaka manoratra ny haabom-peo amin'ny alalan'ireo diakritika ireo ny milina dia azo asiana isa aorian'ilay vaninteny. Ohatra zheng4 ho an'ny teny zhéng. 0 (aotra) no soratana rehefa tsy misy haabom-peo.
Ny pinyin dia mampiasa ny abidy latina. Visavisaina amin'ny teny hoe fanombohana sy ny teny famaranana ny fanononana ny fiteny sinoa. Ny fanombohana dia ny renifeo manomboka ilay vaninteny, kanefa ny famaranana dia zanapeo (misosona na tsy misosona) azo arahana renifeo mamarana (-n, -ng na tsindraindray -r).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanyu_pinyin&oldid=952189"
Dernière modification le 16 Novambra 2018, à 15:46
Voaova farany tamin'ny 16 Novambra 2018 amin'ny 15:46 ity pejy ity.